“Madaxweynuhu awoodiisii waxba la’aan buu kasoo qaaday, saakana hadduu sharci jiro dalka madaxweyne looma aqoonsan karo;;; | Saxil News Network
“Madaxweynuhu awoodiisii waxba la’aan buu kasoo qaaday, saakana hadduu sharci jiro dalka madaxweyne looma aqoonsan karo;;;
Hargeisa (Saxilnews.com);Xildhibaan Axmed Muuse Obsiiye(gacan)oo katirsan Aqalka Golaha Guurtida, ayaa deedafeeyey Warqaddii uu dhawaan
madaxweynuhu u qoray Maxkamadda Sare, taas oo uu kaga codsaday inay fasiraad ka bixiyaan Muranka ka taagan muddo-kordhintii Guurtidu samaysay.
Xildhibaan Gacan oo maalintii shalay waraysi gaar ah siiyey Wargeyska Hubaal, ayaa tilmaamay inuu madaxweynuhu baal maray sharciyaddii iyo awooddii distooriga ahayd ee uu lahaa, isagoo ku dooday inaan loo baahnayn inuu madaxweynuhu warqad noocaas oo kale ah maxkamadda u Gudbiyo.
Waxa uu xildhibaan Gacan sheegay inuu madaxweynuhu leeyahay awooddo buuxa oo uu ku gaadhi karo Go’aan la xidhiidha muddada doorashada la qabanayo, balse aanu awoodahaas adeegsan,
“Madaxweynuhu waxa uu leeyahay awood aad u siyaado ah. Qoddobo badan oo distoorka ku yaalla ayaa awood u siinaya inuu isagu si toos ah Go’aanka Guurtida u yidhaahdo Go’aanka Guurtidu waa sharci oo kaasay ku dhan tahay ama uu si kale uga wareego oo uu yidhaahdo Doorashadayda wakhtigaasaa la qabanayaa, illayn tiisaa kaw ka ah doorasho la qabtee.” Ayuu yidhi Xildhibaan Gacan.
Xildhibaanku waxa isagoo hadalkiisa sii wata uu tilmaamay inay madaxweynaha la gudboonayd inuu si gaar ah go’aankiisa u qaato ka hor inta aanu maxkamadda warqad geynin, waxana uu yidhi,”Waraaqda uu madaxweynuhu Gudbiyey waxa uu ku yidhi Korodhsiimadii Golaha Guurtida ee qoddobka 83-aad ku salaysnayd iyo qoddobaka 41-aad inay sideeda sharci u tahay iyo in kale tafsiir ka bixiya. waxa kale oo uu yidhi Heshiiskii xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka tafsiir ka bixiya, laakiin ma aha inuu waxaas oo kale ku meeraysto wax uu isagu ka awood sarreeyo, isagaa madaxweyne ah, isagaa Awoodda ugu dambaysa leh. Inuu annaga qoddobkayagii kusoo meeraystona ma ahee waa inuu yidhaahdaa Doorashadu wakhtigaasay dhacaysaa, Hadduu doono Taayada ha raacee.”
Waxa uu tilmaamay xildhibaanku inuu madaxweynuhu adeegsan waayey sharciyaddii waddanka, isla-markaana qaatay go’aan aan xilligan loo baahayn,”annaga taayadu ma aha kama damaystii cidda awoodda kama damaysta ah lehina waa Madaxweynaha, markaa madaxweynuhu awoodiisii waxba la’aan buu kasoo qaaday, saakana hadduu sharci jiro dalka madaxweyne looma ictiraafi karo, waayo isagiibaa awooddiisii buriyey oo si meeraysi ah iskaga qaaday.” Ayuu yidhi Xildhibaanku.
Mar uu xildhibaanku ka Hadlayey Go’aanka laga filan karo Maxkamadda Sare, ayuu sheegay inay axsaabta mucaaridku ku khasban yihiin inay aqbalaan Go’aan kasta oo ay maxkamaddu soo saarto, waxana uu yidhi,”Maxkamaddu hadda soo saarto tii Guurtidaa sharci ah waa sharci, hadii kalena waa Daw, laakiin mar walba mucaaridku way ku khasban yihiin inay raacaan waxa maxkamaddu soo saarto.”
By Maxamed Hassan Adam(Faradeero)